8 Maarso Farriinta Maalinta Haweenka Caalamiga ah ee Demiryol-İş | RayHaber | raillynews
HomeGUUD8 March ee Dumarka Caalamiga ah ee Farriinta-Ganacsiga
08 / 03 / 2017 GUUD, Headline, TURKEY
8 Farriinta Maalinta Dumarka Caalamiga ah ee Dumarka-Ganacsiga: Guddiga Hogaamiyayaasha Demiryol-Ganacsi ayaa faafin fariin u diray munaasabadda N NNNEX March ee Haweenka Caalamiga ah ee Haweenka Adduunka.
Farriinta Haweenka ee daabacday Demiryol-Shaqadu waa sida soo socota;
Haweenkeena, oo matalaya fiyoobida, wax soo saar iyo wax-qabad ee dhinacyada kala duwan ee noloshooda joogtada ah, waxay door muhiim ah ka ciyaaraan qaabeynta mustaqbalkeena iyadoo jiilalkoodu sii korayaan jacayl iyo dulqaad la'aan.
Intii lagu jiray Dagaalkii Xorriyadda, Dagaalkii Caanakkale iyo waqtiyada ugu adag ee bulshada; Haweenka Turkiga ah ee dhibka u geysta ayaa kaalin weyn ka qaatay soo nooleynta iyo soo kabashada bulshada.
Haweenkeena, oo haysta qiimaha firfircoon ee bulshada, had iyo jeer waa taajir ka mid ah 8 March International Women's Day sanadkiiba, sababtoo ah waxay door weyn ka ciyaarayaan qaabaynta bulshada.
Haweenkeenu waxay gacan ka geystaan ​​mustaqbalka waddanka in ka badan kuwa kale ee qarnigooda iyo sidoo kale guulaha ay ku gaareen nolasha ganacsiga. Sababtan awgeed, waxaan rumaysannahay in fursado badan oo aan ku bixin karno haweenkeena, bulshada badan ayaan ku xoojin doonaa. Dumarka ayaa ah kuwa ugu muhiimsan ee bulshada.
Doorka haweenka ee faafitaanka nabadda iyo jacaylka aduunka ee dunidu waa mid aad u weyn oo xoojin, haween wanaagsan oo aqoon leh oo aqoon leh ayaa kaalin weyn ka ciyaaraya dayactirka dadweynaha. Waa inaan la iloobin in barayaasha ugu horreeya ee carruurta ay yihiin dumar. Haweenka khibrada leh waa kuwa ugu muhiimsan ee kor u qaadaya jiilalka miyir-qabka ah.
Dumarka ayaa sidoo kale ah dhismayaasha dimuqraadiyadda sababtoo ah sifooyinkaas. Waxaannu u dabbaaldegnaa Maalinta Haweenka Caalamiga ah ee Haweenka Adduunka ee N NNEX March ee Haweenka oo dhan iyada oo kaqeybqaadaneysa haweenkeena dhammaan qaybaha ganacsiga, waxaanan xalinaa dhibaatooyinka muhiimka ah sida rabshadaha, kala-takoorka iyo sinaan la'aanta fursadaha si buuxda, waxaanan jecelahay qoys farxad leh, guryo farxad leh iyo bulsho faraxsan, oo soo bandhigi kara jacaylka iyo ixtiraamka.